ओली र नेपाल पक्षबीच वार्ता कसियो, वार्तामा के भयो कुराकानी ?
आइतवार, असार ६, २०७८ ०७:१८:५१ युनिकोड
वार्तामा के भयो कुराकानी ?
ललितपुरर, २६ जेठ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वक्तव्य र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रति–वक्तव्यले नेकपा एमालेको एकता प्रयासमाथि प्रश्न उठेका बेला दोस्रो तहका नेताहरुबीच वार्ता भएको छ ।
यद्यपि छलफल सकारात्मक रहेको दुबै पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । छलफलमा सहभागी नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘यो पार्टीलाई कसरी एकतावद्ध गराउने भनेर भइरहेको छलफलकै निरन्तरता हो । र सकारात्मक छ ।’ नेता सुवास नेम्वाङले पनि सम्वाद जारी रहने बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ २६, २०७८, ११:३१:००